फेसनमा डिफरेन्स लुक
साप्ताहिक संवाददाता , भाद्र २९, २०७४
एकथरी किशोर पुस्ताले आफ्नो आवरण पंकी स्टाइलमा ढालेका छन्, अर्काथरीले गोथेक शैलीमा रंगाएका छन् । घतलाग्दो त के छ भने, यस्तो शैली मध्ययुगतिरै देखा परेको थियो, जसलाई आधुनिक पुस्ताले फेरि ब्युँताएको छ । फेसनविज्ञहरू भन्छन्— उनीहरूको यो रहस्यमय गेटअप प्राचीन फेसनको पुनरावृत्ति हो । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, भाद्र २९, २०७४
बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर चलचित्रमा पुनरागमन गर्ने अन्तिम तयारी गर्दैछिन् । सैफ अलि खानसँग विवाह गरेपछि चलचित्रमा नदेखिएकी करिना अहिले छोरा हुर्कंदै गएपछि चलचित्रमा आउन तयार भएकी हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
केटीको चक्करमा बर्बाद बाबाहरु
मानव कल्याणका लागि व्यापार–व्यवसायको साम्राज्य निर्माण एवं परोपकारमा त्यसको आम्दानी खर्च गर्ने कुरालाई त जायज नै मान्न सकिएला, तर कतिपय बाबा त्यही आफ्नो बिजनेस र बाबा पदको आवरणमा अनैतिक कर्ममा समेत संलग्न पाइँदै आएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
लिटिल किङ एण्ड क्विन सम्पन्न
भक्तपुर– क्विन्स इभेन्टले आयोजना गरेको दुई भिन्न उमेर समुहका बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरुको सौन्दर्य तथा प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने प्रतियोगिता ‘लिटिल किङ एण्ड क्विन’ सम्पन्न भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नुडल्सको उत्पत्ति कहाँ भयो भन्ने विषयमा चीन, इटाली तथा अरब मुलुकहरूको आ–आफ्नै किसिमको दाबी छ । चीनको यल्लो रिभरको लाजिया उत्खनन् क्षेत्रमा पाइएको नुडल्सले यसको उत्पतिलाई प्रस्ट पारेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
फुटसललाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ
फुटसललाई नेपाली फुटबलको दायरामा ल्याउनुपर्छ । फुटसलको विकासले नेपाली फुटबल खेलाडीहरूलाई पनि धेरै फाइदा पुर्‍याउनेछ भने उनीहरू आर्थिक रूपमा समेत सबल हुनेछन् । हामीले व्यवसायिक वातावरण पनि तयार गर्नुपर्नेछ । यसले नेपाली फुटबलको भविष्यलाई नै फाइदा पुर्‍याउनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
सिरहा नगरपालिकामा दुई चिकित्सक प्रतिस्पर्धामा
भरत जर्घामगर, भाद्र २९, २०७४
प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुवै चिकित्सकका बुबाको हत्या भएको थियो । २०४८ सालमा जिल्ला विकास समितिका सभापति भएका डा. सुभाषका वुवा चन्द्रनारायण यादवको २०५७ असार ५ गते हत्या भएको थियो भने डा. नवीनका वुवा तत्कालीन सांसद हेमनारायण यादवको २०६० माघ १९ गते हत्या भएको थियो । माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षका बेला ती दुवै नेताको हत्या गरिएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
सुष्मा कार्कीसँग लन्डन पुगे काली
नेपाल आईडलको निर्णायकमा बसेसँगै अझै धेरै चर्चा र बेलाबेला विबादमा पनी परेका संगीतकारी कालीप्रसाद बास्कोटा यतिबेला लण्डन पुगेका छन् । उनीसँगै लन्डन पुगेका छन् गायक हेमन्त राना र मोडल सुष्मा कार्की पनि । पुरा पढ्नुहोस्
चन्द्रपुरमा माओवादी केन्द्रको आँखा
पवन यादव, भाद्र २९, २०७४
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सहर चन्द्रनिगाहपुरको राजनीतिलाई आफ्नो कब्जामा लिन माओवादी केन्द्रले आँखा गाडेको छ । रौतहटको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई आफ्नो पोल्टामा पार्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पूरै दम लगाएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
गौरमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
गौर नगरपालिकाका लागि प्रमुख, उपप्रमुखसहित कुल ४७ पदाधिकारीका लागि अहिले प्रमुखमा १७ जना, उप–प्रमुखमा १८ जना, वडाअध्यक्षमा ७१ जना, महिला सदस्यमा ६० जना, दलित महिला सदस्यमा ४४ जना तथा खुल्ला सदस्यमा १ सय ३० जना गरी कुल ३ सय ४० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
‘सिन्ड्रेला नेपाल–२०१७’ को उपाधि जित्न यतिखेर ३० किशोरी प्रतिपस्र्धा गरिरहेका छन् । ९ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालिका सहभागी यस प्रतिभा तथा सौन्दर्य प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण हो । पुरा पढ्नुहोस्